I-Shenzhen Klyde Electronics Co, Ltd yingcali yeemoto player multimedia e China. Sisekwe ngo-2009, emva kweminyaka eli-10 yophuhliso, ngoku saba ngomnye weyona mzi-mveliso wakhokelayo weMult multimedia Palyer eChina. Inkampani yethu igubungela ummandla oziimitha ezili-12, 000 kwaye uqesha abasebenzi abangama-320. Sineeinjini ezingama-43 zee-R&D zeenjineli kunye nabachwephesha abasoloko bephucula nokuphucula iimveliso ezintsha ukuhlangabezana neemfuno zomthengi.
Umthamo wethu wemveliso wenyanga ungunithi ezingama-37,000. Iimveliso zethu kubandakanya zonke iintlobo zeMidlalo ye-multimedia yemoto, enamava iminyaka eli-10 yoyilo, ukuvelisa kunye nentengiso yemultimedia yemoto, simisele ubudlelwane kwezorhwebo kunye nabaxumi abaninzi abaxabisekileyo abavela eJapan, Russia, Ukraine, Turkey, Spain, Germany, Italy, Greece, Switzerland, Iran, Pakistan, Dubai, Israel, Korea, Saudi Arabia, Brazil, Chile, njl.
Ngoku sinikezela ngaphezulu kweemodeli ezingama-600 zemoto ye-multimedia player kubandakanya nochungechunge lweBMW / uthotho lweBenz /
Ungcelele lwe-Audi / VW uthotho / i-Opel uthotho / iRenault uthotho / iToyota uthotho / iSuzuki uthotho / iMazda uthotho / Isuzu uthotho / uthotho lwePugeot / uthotho lweFord / uthotho lweCitroen / Uluhlu lwe-Kia / uthotho lweHyundai kunye nezinye iimodeli, kwilizwe lethu liphela abathengi. Sonke isidlali semultimedia yeemoto ngesoftware entsha kunye neqonga, elizinzileyo nelikhawulezayo. Ukuqinisekisa umgangatho, zonke iimveliso zinesiqinisekiso / i-CE / FCC / ROHS / i-E-MARK. Umgangatho yinkcubeko yethu!
Ukuze uhlangabezane neemfuno zefektri yeemoto, inkampani yethu yapasa i-IATF 16949: 2016.
Emva kweminyaka sikhula, sineqela leengcali ezinamava kakhulu ekufezekiseni isandi seemoto kunye nokhuseleko kuzo zonke iintlobo zeemoto. Ilungu ngalinye linobuchule bokuqhuba iinkonzo esizinikezelayo ngomgangatho ophezulu kakhulu wokuqinisekisa ukuba umthengi ngamnye ufumana eyona nkonzo intle.
Uhlobo lo shishino : Manufacturer
Range Product : Other Auto Electronics , Other Auto Electronics
Imveliso / iNkonzo : Abadlali beDVD yemoto , Indawo yemoto , Abadlali beMedia multimedia , Ukuhamba ngemoto yeGPS , Umsindo weemoto , Irediyo yeemoto
Abasebenzi abapheleleyo : 201~500
Inkunzi (iMillion US $) : US$2000000
Unyaka owasungulwa : 2008
Sekiso : CE , ISO/TS16949 , FCC , FDA , RoHS , Test Report
Idilesi yeNkampani : Building C&D, Zunlong Hi-Tech Science Park, Xieping Rd., Wulian, Longgang Dist.,, Shenzhen, Guangdong, China
I-Annual Sales Volume (i-Million US $) : US$10 Million - US$50 Million
Umqulu wonyaka wokuthenga (i-Million US $) : US$10 Million - US$50 Million
Ukuthumela ngaphandle Ipesenteji : 81% - 90%
IMakethe : Americas , Asia , East Europe , Europe , Middle East , Worldwide
Imveliso yeeLines :8
I-QC yabasebenzi :31 -40 People
IiNkonzo ze-OEM zinikezelwe :yes
Uhlobo lweZiko (iSq.meters) :5,000-10,000 square meters
Indawo yendawo :Building C&D, Zunlong Hi-Tech Science Park, Xieping Rd., Wulian, Longgang Dist., Shenzhen, Guangdong, China
Abadlali beDVD yemoto Indawo yemoto Abadlali beMedia multimedia Ukuhamba ngemoto yeGPS Umsindo weemoto Irediyo yeemoto Abadlali beDVD beCorolla Oreo Abadlali beDVD beDoblo